Ny Teny faharoa: Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao
"Aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin’ny lanitra ambony, na izay et? amin’ny tany ambany, na izay any amin’ny rano ambanin’ny tany. Aza miankohoka eo anatrehany, ary aza manompo azy." Eksodosy 20:4,5
Fanaon’ny olona ny sary vongana, ampisehoana ny andriamaniny, indrindra fahiny tany amin’ny tany Tatsinanana manontolo. Nanana andriamanitra maro ireo firenena, ary nivavaka tamina sampy, izany hoe zavatra misolo toerana ny andriamaniny. Koa notandindomin-doza ny Zanak’Israely hanaraka izany fanao izany sy hivavaka amina andriamani-tsy izy, hiankohoka eo anatrehan’ireo sampiny, ary ny tena ratsy aza, dia hitsaoka an’Andriamanitra amin’ny alalana sary heverina fa maneho ny toetrany.
Ny hoe manao “sampy” ho an’ny tena, dia manilika ny fanambaran’Andriamanitra, manome sary diso momba Azy, ary ratsy noho izany aza, manimba io fanambarana io, amin’ny fanampiana zavatra heverina ho voninahitr’Andriamanitra, kanefa matetika loatra dia manazimba Azy. Tsy misy zavatra hita maso, afaka maneho araka ny tokony ho izy ny toetran’ny Tompo. Andriamanitra dia tsy hita maso. Tsy haintsika ny maneho Azy amina sary, na maminavina Azy fotsiny aza. Ny apostoly Paoly dia manoritra mazava amin’ny Ateniana fa “tsy mety raha ny fomban’Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena, na volafotsy, na vato voasoratry ny fahaizana aman-tsain’olombelona” (Asan’ny Apostoly 17:29).
Ahoana àry no hanatanterahana ny tena fitsaohana? Hoy Jesosy tamin’ilay vehivavy samaritana nanontany tena momba ny toerana tokony hivavahana amin’Andriamanitra: “Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana” (Jaona 4:24).
Io Andriamanitra tsy hita maso io dia nanambara ny tenany, nanjary hita maso tao amin’ny Zanany, Izay nirahiny ho ety an-tany. Ao aminy sy amin’ny alalany irery ihany no ianarantsika mamantatra Ilay Andriamanitra tia sy mikarakara antsika.